Intel wuxuu yiri way kafiican tahay Apple Silicon laakiin waxaan wada ognahay inaysan jirin isbarbardhig | Waxaan ka socdaa mac
Intel wuxuu yiri way kafiican tahay Apple Silicon laakiin waxaan wada ognahay inaysan jirin isbarbardhig
Imaatinka Apple Silicon, Apple waa laga tegey (gabi ahaanba ma ahan) Processor Intel iyo chip. Horumar run ah oo sidoo kale u taagan badbaadinta weyn ee shirkadda tufaaxa oo si macquul ah u metelaysa khasaare weyn Intel. Haddii aan ku darno tan Apple Silicon waxay umuuqataa bahal dhab ah marka la barbar dhigo processor-yada kale, waxaan leenahay guuleyste cad. Laakiin Intel waxay isu difaacdaa sidii calool bisad oo kale waxayna sheeganeysaa inay weli hayso qaar ka mid ah processor-rada ka dheereeya Apple-ka cusub. Laakiin arrimuhu maaha sida ay sheeganayaan.
Processor Intel wuxuu isbarbar dhigayaa Apple Silicon laakiin kama fiicna tan
Imaatinka Apple Silicon, Intel ayaa lumiyay mid ka mid ah iibsadayaasheeda ugu fiican. Apple mar dambe ganacsi lama yeelan doonto shirkaddan, inkasta oo hadda ay weli sii jiri doonaan kombuyuutarro ay ku shaqeynayaan. Laakiin isbeddelka, sida uu Tim Cook uga digay, waa in laga tirtiro geedi-socodka dibedda nolosha dadka isticmaala tufaaxa. In sidan Intel way ka maqnaan doontaa suuqa Mac. Caqli ahaan taasi ma rabto oo waxay sii wadaa dagaalka si ay adduunka u tusto inay wali qatar ku jirto.
Waxay bilowday isbarbardhiga tijaabada mid ka mid ah processor-keeda iyo kan Apple Silicon oo sheeganaya inay jiraan horumarin lagu sameeyay tan hore oo awood u leh inay garaacdo tan labaad. Si kastaba ha noqotee, imtixaannadu dhab ahaan maahan sidaas darteed gabagabada la gaadhay ayaan run ahayn. Apple Silicon-ka ayaa wali ah kan ugu fiican uguna hegemonsiga Intel ayaa soo socda (waad arki kartaa inuu soo socdo) dhamaadka. Ma aha inay baaba'ayso, taasi waxay ahaan laheyd wax aan macquul aheyn, laakiin waxaa jira noocyo badan oo laga kala xusho.
Tijaabinta Intel waxay sheegaysaa in isbarbar dhig 13-inch MacBook Pro ah oo leh M1 iyo 16 gigabytes oo xasuusta ah Intel Core i7-1185G7 oo leh afar gees, sideed dun iyo xawaare saacadeed ugu badnaan ah 4,8 GHz, oo ay taageerayaan 16 GB xasuusta. Sawirada waxaad ka arki kartaa sida guud ahaan ay umuuqdaan inay muujinayaan Intel chip sida la isbarbar dhigi karo ama uga sareeya M1 howlo kala duwan, in kastoo digniino muhiim ah ay jiraan. Bilawga, jaangooyooyinku waxay adeegsadaan imtixaanada Intel ee "hagidda isticmaalka dhabta ah ee adduunka", tijaabooyin taxane ah oo aan u muuqan inay si caadi ah u sameeyaan inta badan tijaabiyaasha kale.
Natiijooyinka ay muujisay Intel waxay tilmaamaysaa in jabkeedu uu "ka badan yahay 30% guud ahaan isla markaana ku dhowaad 3 jeer ka dhakhso badan yahay muuqaalka kor u qaadista sawirka internetka" ee M1, halka "astaamaha qaar sida PDF dhoofinta" ee Office 365 ay yihiin "ilaa 2.3 jeer ka dhakhso badan. " Imtixaannadu waxay u muuqdaan inay gebi ahaanba iska ilaalinayaan isticmaalka transcoding qalabka ku saleysan M1, intaad isticmaaleyso Intel's nidaamka joogtada ah ee qalabka 'QuickSync' ee loogu talagalay tijaabada Windows.
In kasta oo Apple ay diiradda saareyso caawinta barashada mashiinka ee M1, Intel wuxuu isku dayayaa inuu la dagaallamo sheegashada cajiibka ah ee ah in jabkeedu 6 jeer ka dhakhso badan yahay tijaabada Topaz Labs 'marka loo eego M1. Imtixaanada Premiere, Intel waxaa la sheegay inuu 1.7 jeer ka dhakhso badnaa, halka Photoshop iyo Lightroom Classic ay tijaabiyaan dwaxay kuxirantahay tarjumida Rosetta 2 iswaafajinta waxay keeneen xawaare "ku dhowaad 1.5 jeer ka dhakhso badan" Intel.
Intel ayaa sidoo kale sheegtay M1 wuxuu ku guuldareystay inuu sameeyo sideed ka mid ah 25ka tijaabo ee uu sameeyay. Khaladaadkaan waxaa ka mid ahaa hawlo fudud oo fudud, sida "U beddel kalandarka Muuqaalka" ama "Ku bilow shirarka fiidiyowga" ee Zoom Sidoo kale, Intel waxay sheeganeysaa in nolosha batteriga ay tahay 10 saacadood iyo 12 daqiiqo xaalado kala duwan oo tijaabo ah.
Haddii aan ku biirno isbarbardhigyadan oo xaqiijinaya oraahda (isbarbardhiggu waa neceb yahay) kan ku dhawaaqida in Microsoft ay ku bilaabatay iskudhafkeeda u dhexeeya Tablet iyo PC, Waxaan leenahay istiraatiijiyad dhab ah oo aan kaga hor tagno kuwa ugu fiican. Taasi waa waxa ay u egtahay maxaa yeelay bartilmaameedyadu maaha adduun dhab ah mana aysan isticmaalin qalab caadi ah. Marka waa inaan dhahnaa waxaan haynaa neef xayawaan ah oo dhaawac ah oo isku dayaya inuu difaaco boqortooyadiisa, laakiin hadda waxaa jira alfa lab ah oo cusub oo ka mid ah kuwa wax soo saara oo midna ay leedahay shirkadda Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Intel wuxuu yiri way kafiican tahay Apple Silicon laakiin waxaan wada ognahay inaysan jirin isbarbardhig
Waxaan tijaabinay kamaradaha amniga ee HomeKit, Anker eufyCam 2C
Apple waxaa laga yaabaa inay hakisay wadahadaladii ay kula jirtay matoorrada Kia